Indlu yangaphambili yechibi lesitayela seHacienda - I-Airbnb
Indlu yangaphambili yechibi lesitayela seHacienda
Lago de Coatepeque, Santa Ana, i-El Salvador
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lissette
U-Lissette Ungumbungazi ovelele
I-Coatepeque lake iyindawo yentaba-mlilo, ethathwa njengelinye lamachibi amahle kakhulu emhlabeni ngomeluleki wohambo. Lesi sakhiwo sizungezwe ukuthula kwezintaba, izithunzi zezihlahla ezivuthiwe kanye nokubukwa okumangalisayo. Okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele!
Idiphozithi yesibambiso ingu-$300 (Amadola ase-Us)
Izivakashi ezingaphezu kwezingu-10, kuzokhokhiswa imali eyengeziwe engu-$50. Azikho izivakashi ezengeziwe ezivunyelwe ukuchitha ubusuku ngaphandle kwesaziso kumnikazi kanye nenkokhelo yemali eyengeziwe.
Kwangathi ukuziphatha kwezihambeli kudlule amakhodi okuziphatha noma kuphumele ekulimazeni impahla, umnikazi wendlu unelungelo lokuthatha isinyathelo ngokushesha futhi asule isivumelwano ngaphandle kokubuyiselwa imali.
4.81 · 176 okushiwo abanye
Le Ndlu isogwini olusenyakatho lwechibi, umakhelwane neLake House kaMongameli wase-El Salvador, futhi elinye lamaBandla amaKhatholika amabili echibini, liqhele ngebhlokhi elilodwa, futhi imizuzu eyi-8 ukusuka eCardedeu (2 kms). Indawo ehlala kuyo iphephile futhi ifanele ukuzijabulisa komndeni okuningi.
Ukuthatha esikhumulweni sezindiza samazwe ngamazwe sase-El Salvador "Monseñor Arnulfo Romero" kungahlelwa kusenesikhathi ukuze kukhishwe imali eyengeziwe.
Ezokuthutha eziya ezindaweni ezikhanga izivakashi eziseduze njengezintaba-mlilo, izindawo zokuvubukula zaseMayan, amadolobhana amancane asePintoresque nokunye kungahlelwa kusenesikhathi ukuze uthole imali eyengeziwe.
Umnikazi wendlu uzotholakala 24/7 uma isivakashi sidinga ukuxhumana naye.
Ezokuthutha eziya ez…
ULissette Ungumbungazi ovelele